I-Junior Year and College admissions
Kubafundi nabazali I zicelo zo ku sebenza
Ukulungiswa kweKholeji kwiBakala lesi-11
Sebenzisa iNyaka ye-Junior yokudala iSicwangciso soPhumelelo seKholeji yeeKholeji
Kwinqanaba le-11, inkqubo yokulungiswa kwekholeji ikhawuleza kwaye kufuneka uqale uqaphele ngokukhawuleza ixesha elizayo kunye neemfuneko zesicelo. Qaphela ukuba ngo-11 kwibanga akudingeki ukuba ukhethe ngqo ukuba ungayifaka phi, kodwa kufuneka ube neplani yeplani ukuze uphumelele iinjongo zakho ezibanzi zemfundo.
Izinto ezi-10 kwoluhlu olungezantsi ziya kukunceda ugcine umkhondo wezinto ezibalulekileyo kwiikholeji zokungeniswa kwi-kholeji yakho.
Ngo-Oktobha, Thatha i-PSAT
UPeter Cade / I-Bank Image / Getty Izithombe
Iikholeji aziyi kubona izikolo zakho ze-PSAT, kodwa amanqaku amahle kulo mvavanyo anokuguqulela kumawaka eedola. Kwakhona, uviwo luya kunika ingqiqo yakho yokulungiselela iSAT. Khangela ezinye iinkcukacha zeekholeji uze ubone ukuba izikolo zakho ze-PSAT zihambelana nemigangatho ye-SAT efakwe kwizikolo ozifunayo. Ukuba akunjalo, usenokuba nexesha elininzi lokuphucula izakhono zakho zokuthatha uvavanyo. Qiniseka ukuba ufunde ngakumbi malunga nokuba kutheni iindaba ze-PSAT . Kwabafundi abangacwangcanga ukuthabatha i-SAT kufuneka bathathe i-PSAT ngenxa yamathuba okubhalwa ngumfundi.
Thatha inzuzo ye-AP kunye nezinye iiNkundla zeNqanaba eliphezulu
Akukho nxalenye yesicelo sakho sekholeji inomthwalo obaluleke ngaphezu kwerekodi yakho yemfundo . Ukuba unako ukuthatha izifundo ze-AP kwi-11 kwibakala, yenza njalo. Ukuba unako ukuthatha ikhosi kwikholeji yasekhaya, yenza njalo. Ukuba unokufunda isifundo ngokubanzi kunzulu oko kufunwa, yenza njalo. Impumelelo yakho kwimfundo yezinga eliphezulu nakwiikholeji yinkcazo ecacileyo yokuba unezakhono zokuphumelela kwikholeji.
Gcina amaBakala akho phezulu
11 ibanga mhlawumbi unyaka obaluleke kakhulu ekufumaneni amabanga aphakamileyo kwizifundo ezinzima . Ukuba unamabanga amanqaku amancinane kumgangatho we-9 okanye we-10, ukuphuculwa kwinqanaba le-11 kubonisa ikholeji oyifunde ukuba ube ngumfundi olungileyo. Uninzi lwamabanga akho omgangatho ophezulu wexesha elidlulileyo ukuza kudlala indima enkulu kwisicelo sakho, ngoko ke unyaka omncinci kubalulekile. Ukulahla kwamabakala akho kwi-11 kwibakala kubonisa ukuhamba ngendlela engafanelekanga, kwaye kuya kuphakamisa iiflegi ezibomvu kubantu beekholeji abamkelwayo.
Qhubeka Uhamba NoLwimi Lwamanye amazwe
Ukuba ufumanisa ukufundiswa kweelwimi okanye ukulukhuni, kuyalinga ukuyeka kulo kwaye uthengele ezinye iiklasi. Musa. Awuyi kusebenza kuphela ngolwimi ekusebenzeni kakuhle ebomini bakho, kodwa kuya kubangela ukuba abantu bamkele iikholeji bamkele iikholeji kwaye bavulele ezinye iinketho xa usufika ekukholeji. Qiniseka ukuba ufunda ngokubanzi malunga neemfuno zolwimi kubafaki bezicelo beekholeji .
Kucinga ukuba iNkokeli yoBunkokheli kwiNgqesho yexesha elongezelelweyo
Iikholeji zifuna ukubona ukuba ungumphathi wecandelo lebhodi, umphathi weqela okanye umququzeleli womcimbi. Qaphela ukuba akudingeki ukuba ube yinkokeli yokuba yinkokheli - umdlali webhola webhola yesibini okanye umdlali wexilongo wesitulo wesithathu unokuba yinkokheli ekuxhaseni imali okanye ekuncedeni abantu. Cinga ngeendlela onokuzifaka entlangeni yakho okanye kuluntu. Iikholeji zikhangela iinkokheli zesikhathi esizayo, kungekhona abantu abajongene nabo.
NgeSwitzerland, thabatha i-SAT kunye / okanye UMTHETHO
Gcina umkhondo wexesha lokubhalisa kwe- SAT kunye nemihla yokuvavanya (kunye nemihla ye-ACT ). Nangona kungabalulekanga, yinto efanelekileyo yokuthatha iSAT okanye UMTHETHO kunyaka wakho omncinane. Ukuba awufumananga amanqaku amnandi , unokuchitha ixesha elithile kwisakhiwo sasehlotyeni zakho izakhono ngaphambi kokuba uphinde uvavanye uviwo lokuwa. Iikholeji zijonga kuphela izikolo zakho eziphezulu.
Ukutyelela iiKholeji kunye nokuPheqa iWebhu
Ngehlobo lonyaka wakho omncinci, ufuna ukuqala ukukhangela uludwe lweekholeji oya kuzisebenzisa. Sebenzisa lonke ithuba lokutyelela iikholeji . Dlulisa amehlo kwiwebhu ukuze ufunde kabanzi malunga neentlobo ezahlukeneyo zeekholeji. Funda ngokusebenzisa iincwadana ezifunyanwa entwasahlobo emva kokuthatha i-PSAT. Zama ukuqaphela ukuba ubuntu bakho bufaneleke kangangoko kwikholejini elincinane okanye kwiyunivesiti enkulu .
KwiSwitzerland, Hlangana noMcebisi Wakho kunye noHlelo lweKholeji
Emva kokuba unamabanga amabini amancinane kunye namaziko akho e-PSAT, uya kukwazi ukuqala ukuqikelela ukuba zeziphi iikholeji neeyunivesithi ziya kufinyelela kwizikolo , izikolo ezifanayo , kunye nezikolo zokhuseleko . Khangela kwiikholeji zekholeji ukubona amanani omlinganiselo wokumkela kunye namanqanaba omgangatho we-SAT / ACT. Okwangoku, uluhlu lwezikolo ezili-15 okanye ezingama-20 liyinqobo yokuqala. Uya kufuna ukunciphisa uludwe phambi kokuba uqale ukufaka isicelo kunyaka ophezulu. Hlangana nomcebisi wakho wokucebisa ukuba uthole ingxelo kunye neengcebiso kuloluhlu lwakho.
Thatha i-SAT II ne-AP iimviwo njengezifanelekileyo
Ukuba unokuthatha iimviwo ze-AP kunyaka wakho omncinci, zinokudibanisa kakhulu kwi-kholeji yesicelo sakho. Naziphi na ii-4 nee-5 ozifumanayo zibonisa ukuba uzilungele ngempela iikholeji. Unyaka ophezulu ii-APs zilungele ukufumana iikhredithi zeekholeji, kodwa zifike emva kwexesha ukubonisa kwi-kholeji yesicelo sakho. Kwakhona, ezininzi iikholeji ezikhuphisanayo zifuna iimvavanyo zesifundo se-SAT II . Thatha oku kungekudala emva kwekhosi yakho ukwenzela ukuba loo nto ihlaziywe engqondweni yakho.
Yenza Uninzi Lwehlobo Lwakho
Uya kufuna ukutyelela iikholeji zasehlotyeni, kodwa ungayifaki isicwangciso sakho sehlobo sasehlobo (okokuqala, akuyiyo into ongayifaka kwiikholeji zakho). Kungakhathaliseki ukuba unomdla kunye neenjongo zakho, zama ukwenza into enomvuzo owenzayo. Ihlobo eliqhelekileyo elisetyenziselwa ihlobo linokuthatha iifom ezininzi-umsebenzi, umsebenzi wokuzithandela, ukuhamba, iinkqubo zasehlobo kwiikholeji, ezemidlalo okanye kumculo wekampu ... Ukuba izicwangciso zakho zasehlotyeni zikuzisa kumava amatsha kwaye uzenzele umngeni kuwe, uceba kakuhle.
I-Facebook, i-Google kunye ne-College Admissions
Ingaba Uninzi Kangakanani Ufuna Ukuya Kukholeji?
Iikholeji zeekholeji 101
Ukufaka isicelo kwiKholeji? Iifayile ze-Facebook kufuneka uCime ngoku
I-Essay Application Application Option 6: Ukulahlekelwa Ixesha lexesha
Iingcaphuno ezingalibalekiyo Tommy Boy
Inkolelo kunye nokuchithwa kwegama lesiJapane elithi "Kashikoi"
Kutheni i-Statue yeLungelo loKhuseleko?
Uphi ukuphambuka okungaqhelekanga okuthethileyo?
Ziqhelise ekusebenziseni iiFomu zangaphambili zeeVenzi
Ngaba amaKatolika angayifumana njani iSidlo esingcwele?
Ndingayifumana njani umculo wam kwiSpotify?
Iingoma zezulu eziphezulu zee-1970
Ubugcisa kunye nefuthe likaMaurice Sendak